आज बिदेशी मुद्राको विनिमयदर कहाँको कति? - Everest Dainik - News from Nepal
आज बिदेशी मुद्राको विनिमयदर कहाँको कति?
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार (मंसिर २०) जारी गरेको विनियमदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ ।
यस्तै, युरो एकको खरिददर १२६ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १२६ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी पाउण्ड एकको खरिददर १४९ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर १५० रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ ।
यसैगरी, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ।
यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ ।
र, युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर (सुचीसहित)
ट्याग्स: बिदेशी मुद्रा, राष्ट्र बैंक, विनिमयदर